VLC bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu, free na-emeghe iyi cross n'elu ikpo okwu media Player dị taa. Ọ nwere kpuchie na-nwere ike igwu fọrọ nke nta niile dị iche iche nke multimedia faịlụ n'elu nke DVD, CD, Audio, VCDs na ọtụtụ ndị ọzọ. Gịnị bụ otú ọma banyere VLC bụ eziokwu na ọ bụ maka bụla ngwaọrụ otu onye nwere ike na-eche nke, ọ ga-abụ Windows, Mac, Android, ma ọ bụ iPhone, VLC na-agba na ọ bụla na-ewu ewu sistemụ na dị taa.
Ebe a bụ ụfọdụ nke njikọ si ebe ị nwere ike ibudata na-enwe VLC 64 bit na kọmputa gị.
VLC akwado a nnukwu iche iche nke ọdịnaya. Ọ nwere ike igwu videos, ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-mebiri emebi, emechaghi ma ọ bụ na-ezughị ezu, dị ka faịlụ na ka na-nbudata n'aka ndị ọgbọ na-ekiri nhụjuanya (P2P) netwọk. Ọ na-arụ m2t MPEG iga iyi (.TS) faịlụ mgbe ha ka bụ ndị na usoro nke ịbụ digitized site na HDV igwefoto site a FireWire USB nke na-eme ka o kwe omume nyochaa video mgbe ọ na-na-na-egwuri. Ọ nwekwara ike iji libcdio iji nweta .iso faịlụ nke mere na ọrụ nwere ike igwu faịlụ na a disk image, ọbụna mgbe onye ọrụ sistemụ nwere ike na-arụ ọrụ kpọmkwem .iso oyiyi.
VLC-akwado ndị niile ọdịyo na video formats-akwado site na libavcodec na libavformat. Nke a pụtara na VLC nwere ike igwu azụ H.264 ma ọ bụ MPEG-4 Part 2 video nakwa dị ka nkwado FLV ma ọ bụ MXF faịlụ formats "nke igbe" na-eji FFmpeg si ọba akwụkwọ. Alternatively, VLC nwere modul maka codecs na-adịghị dabeere FFmpeg si ọba akwụkwọ. Ọ bụkwa otu n'ime free software DVD Player na-eleghara DVD mpaghara nzuzo na RPC-1 femụwe draịva,-eme ka ọ a mpaghara-free ọkpụkpọ. Otú ọ dị, ọ na-adịghị eme otu ihe ahụ na RPC-2 femụwe draịva, dị ka okwu ikpe ndị a n'ógbè nzuzo na-akwanye site mbanye onwe ya, Otú ọ dị, ọ ka nwere ike arụrụala-ịmanye CSS izo ya ezo na-egwu a mba ọzọ-region DVD na ihe RPC -2 mbanye. VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ nwere ụfọdụ nzacha na ike ịkpaghasị, bugharia, kewaa, de-interlace, na mirror videos nakwa dị ka ike ngosi mgbidi ma ọ bụ tinye a logo machie. Ọ nwekwara ike mmepụta video dị ka ascii nkà.
VLC 64 bit media ọkpụkpọ nwere a modular imewe na-eme ka ọ nnọọ ọrụ enyi na enyi. Ọ nwere ihe karịrị 380 modul, niile n'ihi na nke modular imewe nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe agụnye a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke modul / plugins maka ọhụrụ faịlụ formats, codecs ma ọ bụ dị iche iche gụgharia ụzọ. N'ezie, ọ na-emepụta ya eserese nke modul dynamically, dabere na ọnọdụ na-na ndabere nke input protocol, codec, faịlụ Ọkpụkpọ, video kaadị ike na ọtụtụ ndị ọzọ yiri parameters.
Ebe ọ bụ na ọ fọrọ nke nta na ihe niile dị VLC bụ a modul, VLC si isi nwere ike ẹkedori otu, ọtụtụ ma ọ bụ ọ interfaces mgbe niile. Nke a na-eme ka ya interface ukwuu na-eme mgbanwe na customizable. N'ezie, na-eji skins2 interface, VLC n'ezie na-akwado a nnukwu iche iche nke mpụga skins ka nke ọma, gụnyere ndị maka Winamp 2 na XMMS. N'ozuzu, àgwà maara ihe, VLC mụ unmatched na n'elu notch ka tụnyere ya ndị asọmpi.
Na, ihe nile a na-abịa na a obere ngwugwu nke 28,45 MB nke bụ size nke nwụnye faịlụ nke VLC 2.2.1 64 bit, ọ bụghị ichefu na ọ bụ dị otutu asụsụ dị ka Spanish, Swedish, Thai, Dutch na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ndakọrịta na dị iche iche sistem
Nyere na VLC bụ a cross n'elu ikpo okwu mgbasa ozi ọkpụkpọ, ọ nwere ike na-agba ọsọ na nsụgharị dị iche iche nke Windows, OS X, iOS, Linux, Android, BSD, BeOS, os / 2, Solaris, nkeji okwu na QNX. Ọ pụrụ ọbụna ga-eji na ọtụtụ ndị ọzọ omume gụnyere a nnukwu iche iche nke APIs, nchọgharị plugins, eMule, KCeasy, Miro, breeki aka wdg
Olee otú iji VLC
Ugbu a, ka anyị inyocha otú i nwere ike iji VLC ọkpụkpọ ime dị iche iche bara uru na kemfe ihe.
1) AirTune gụgharia - A arụmọrụ maka Apple si Airport Express, ọ na-ekwe na-arụ media faịlụ na n'ụlọ gị gị na stereo okwu. VLC akwado AirTune gụgharia.
2) Belata ókè ị na VLC ọkpụkpọ ka usoro tree - I nwekwara ike iwelata VLC gị usoro tree, ịhụ screenshot n'okpuru maka ụzọ ime nke ahụ.
3) tọghata gị faịlụ site na iji VLC - Nke a bụ ihe ịtụnanya atụmatụ nke VLC. Ị nwere ike tọghata gị mgbasa ozi faịlụ dị iche iche formats. Ka ihe atụ, mp3 faịlụ nwere ike converted ACC, mp4, OGG, ASF TF wdg Ị pụrụ ọbụna tọghata PDF ka mp3 / mp4 mere na ha nwere ike na-agụ dị multimedia faịlụ na mobile ngwaọrụ. Bụ na a jụụ atụmatụ?
4) nseta ihuenyo gị video - Na VLC, onye pụrụ ọbụna iri screenshots nke videos, ọbụna n'oge playback. Weghara a snapshot, na-aga Menubar> Vidio> snapshot.
5) Play ndepụta okwu - Mgbe akpọ a nkiri ị pụrụ bụghị mgbe niile nwere nhọrọ nke na-akpọ ndepụta okwu. N'ọnọdụ dị otú ahụ ị nwere ike ibudata ndepụta okwu si website dị ka moviesubtitles.org. Ị nwere ike ma nyegharịa sobtaitel faịlụ ka dakọtara aha gị fim ma ọ bụ i nwere ike nchọgharị faịlụ aka ya. Na aga ikpe (renaming faịlụ) egwu faịlụ na nanị nri-pịa na ihuenyo na-aga ndepụta okwu, ị ga-anya! The ndepụta okwu na-ama na nyeere! Na mgbe e mesịrị, ị ike iji aka na-agagharị na ndepụta okwu faịlụ na-enyere ya site File> Njikwa Open> Lelee Iji ndepụta okwu checkbox> Chọgharịa faịlụ> play.
6) Control ma hazie VLC - One nwere ike mfe ịchịkwa VLC ọkpụkpọ na keyboard / ọṅụ na-arịa ọrịa na-eji Hotkeys na ịrụ ọrụ dịgasị iche iche dị ka mgba ọkụ ka ihuenyo zuru, na-amalite playback, kwụsịtụ na-akpọ, speedup ma ọ bụ onye na-adịghị playback ma ọ bụ Ikwu ọzọ ngalaba.
7) View videos na di ntakiri interface - Ị pụrụ ọbụna mgbe vidiyo na VLC na ihuenyo zuru oke na ka na-na a nche na gị na ndị ọzọ ngwa n'otu oge dị ka mma.
8) Hazie VLC interface - VLC ọkpụkpọ na-enye gị a otutu nnwere onwe a mgbe ọ na-abịa customizing ya interface. Ị pụrụ ime ka ọkpụkpọ anya ọzọ yi na fancy dị ka ị biko.
Wondershare Player, Dị nnọọ ka VLC, dị maka Windows, Mac na Android nakwa na nwere ike igwu nta ọ bụla ọdịyo na video usoro. Otu nwere ike jikọọ ya ọtụtụ ngwaọrụ ma mekọrịta ha ọba akwụkwọ. Ọ na-akwado downloads, na-agụ DVD, camcorders, media dekọrọ na PC, Laptọọpụ, smart igwe wdg Ọ na-enyekwa ọkọlọtọ nakwa dị ka HD àgwà ọdịyo na video gụgharia.
Wondershare Player Bụ otu n'ime ndị kasị media Player na nwere ike igwu music na video faịlụ n'otu ntabi enweghị ihe ọ bụla glitches. Otu nwere ike mbugharị na na ka na-enwe elu àgwà n'ụzọ doro anya, ihe na-ọtụtụ ndị ọzọ media Player enweghị ka a mma. Ọ nwere ọzọ magburu onwe mma nke na-enye ohere akpaaka shutdown nke igwe mgbe playback. Ịbụ otu n'ime ndị kasị nso-nso àjà na ahịa, ọ nwere ụfọdụ ikenyeneke mbiet atụmatụ na-ụzọ mma karịa ya ndị asọmpi.
Anyị ukwuu nwere ike ikwu na ị na-agbalị ya; ị nwere ike ibudata Wondershare Player.
> Resource> VLC> Download VLC 64 bit were were!